कान्तिपुर संवाददाता , कार्तिक १२, २०७४
कतारस्थित नेपाली राजदूत प्राध्यापक रमेशप्रसाद कोइराला विगतमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डजस्ता श्रम मामलाका कार्यकारी निकायसम्बद्ध थिए । कोइराला नेपाल सरकादद्वारा प्रस्तावित लेबर बैंकको अवधारणा ल्याउनेदेखि मलेशियासँगको द्वैपक्षीय श्रम सम्झौताका चरणमा निकै सक्रिय रहेका थिए । कतारमा सन् २०२२ मा हुन लागेको फुटबल विश्वकपको होहल्ला र खाडी राजनीतिको आन्तरिक चपेटामा जारी नाकाबन्दीका माझ राजदूत कोइरालासँग दोहास्थित नेपाली दुतावासमा कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
बाह्य हस्तक्षेपमार्फत एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिएको थियो, निषेध गरिएको थियो भन्ने जुन चर्चा छ, त्यसलाई यो गठबन्धनले जवाफ दिएको छ । कसैले बाहिरबाट एक्ल्याउन खोजेर यहाँ एक्लिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । भारतको राज्यसभा बैठकमा तीन सदस्यले नेपालमा कुनै हालतमा एमालेले जित्नु हुँदैन, ओलीले जित्नु हुँदैन भनेर बोलेका थिए । त्यो सुहाउने काम होइन । एमालेले आफूलाई बलियो पार्न र ‘आइसोलेसन’को पहललाई विफल पार्न प्रयास गर्‍यो, सफल पनि भयो ।
‘सामूहिक लगानी, स्मार्ट एनआरएनए, एकेडेमी एजेन्डा’
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन २९, २०७४
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभा राजधानीमा चलिरहेको छ । यो महाधिवेशनबाट संघको नेतृत्वमा पुग्न एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का उपाध्यक्ष भवन भट्ट र सदस्य जमुना गुरुङ चुनावी मैदानमा छन् ।
राणाकालमा 'मृत स्थिरता’ थियो : जगदीश शमशेर
देवेन्द्र भट्टराई, आश्विन २४, २०७४
यो मानसिक असन्तुलन हुँदा गरिने कुरा हो, मानसिक दिवालीयापन । हाम्रो एकातिर हात्ती छ, अर्कातिर ड्रागन । अनि हामी बीचमा ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ ? बरु दुइतिर यस्ता बिशाल राष्ट्र छन् जसको सम्पन्नता र समृद्धिको ‘कप’ बिस्तारै भरिने क्रममा छ, अब यो छचल्किएर थोरबहुत हामीकहाँ पोखिए मात्रै पनि हामीलाई काफी हुन्छ । यो होडमा ‘ब्रिज’ बन्न खोज्नु भनेको पुल भासिने र भाँचिने अवस्था आउनु हो, यो ख्याल राख्नैपर्छ ।
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ११, २०७४
प्रत्येक वर्ष २९ सेप्टेम्बरलाई संसारभर विश्व मुटु दिवसका रुपमा मनाइन्छ । यस दिवसको मुख्य सन्देश मुटुरोग सम्बन्धि चेतना फैलाईयसबाट बच्न तथा सावधानी हुन उत्प्रेरित गर्नु हो । सानै उमेरमा छात्रवृत्ति पाएर बेलायत आएका अर्थ व्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यलाई चौतीस वर्षकै कलिलो उमेरमा अकष्मात ह्दयाघात भयो ।
[अन्तर्वार्ता] बनिसकेका मन्त्री फिर्ता हुँदैनन् : प्रधानमन्त्री देउवा
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ९, २०७४
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औं महासभालाई सम्बोधन गरेपछि भेटिंदा निकै प्रफुल्ल मुद्रामा थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको तर्फबाट महासभामा सम्बोधन गर्ने देउवा पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । यसअघि दुईपटक महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिसकेका उनले यसपटक कस्तो अनुभूति गरे ?
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ८, २०७४
राज्यले आफ्नो धर्म छाड्नेभन्दा पनि एकपक्षीय हिसाबले कुनै निश्चित धर्म र संस्कृति लाद्नु भएन । अहिले पनि सरकारी सञ्चार माध्यमले दसैं ‘हिन्दुहरूको महान् चाड’ भनिरहेका हुन्छन् । सरकारी चिठीपत्रमा पनि यस्तै भाषा हुन्छ । सरकारले दसैंलाई विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ । यसो गर्दा त राज्य एकपक्षीय भएको देखियो । जब म हिन्दु होइन भने त यो दसैं मेरो होइन भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ नि । ‘हिन्दुहरूको चाड’ भन्नुको सट्टा ‘नेपालीको महान् चाड’ भने पनि त हुन्छ । यस्ता खालका अभ्यासमा राज्य निरपेक्ष रहनुपर्‍यो । एउटालाई मात्रै माया गर्नु भएन ।